China Automatique Digital Wrist Blood Pressure Monitor sy ny mpanamboatra | Binic
Ny fihenan'ny tosidranao dia mety hampahory. Ny YKBPW dia manao mpanara-maso tosi-drà azo antoka sy marina ara-pahasalamana izay mora ampiasaina ao an-trano ihany koa. Ity dia mpanara-maso ny tosidra ambony amin'ny sandry ambony ho an'ny fampiasana ao an-trano izay mety ihany koa ho an'ireo olona manana sandry lehibe kokoa!
Mandeha ho azy YKBPW Wrist Blood Pressure Monitor mitondra tena portability ho an'ny famantaranandro. Ity mpanaraha-maso mavesatra maivana ity dia mety ho an'ny olona mandeha sy mahatakatra ny famakiana ny tosi-dra. Samy famantarana tsy mitongilana ny fitempon'ny fitepon'ny fony sy ny fanondroana ny tsindry tosi-drà manome ho an'ny mpampiasa.
Fanehoana LCD nomerika
Hery avy amin'i
Fatra fandrefesana 3loody
3lue, Pink, Volomparasy, Green, Grey
KPa na mmHg
Fahamarinana fandrefesana 3lood
Ao anatin'ny 3mm Hg (0 4kPa)
Fatra fandrefesana volo
Kapoka 40-199 / min
Volavola malefaka kely
Asehoy ny seho nomerika LCD
Izy io dia afaka mitahiry vondrona 99 amin'ny valin'ny fandrefesana olona roa ary mampiseho ny salanisa amin'ny valin'ny fandrefesana intelo farany
Fanerena automatique sy decompression
Fandefasana feo amin'ny feo (Tsy voatery)
Ny fanasokajiana ny tosi-dra dia manome fahafaha-manao ho an'ireo mpampiasa ny mitsara raha ara-dalàna ny sandan'ny tosidra na tsia
Sehatra fampisehoana 2: kPa, mmHg
Ny herinaratra dia mandeha ho azy afaka 1 minitra aorian'ny fandrefesana.
Ny LCD Display misy sanda isa mazava dia miseho mandritra ny fandrefesana ny famakiana mety; Ny fampielezana am-peo mivantana ny haavon'ny tosi-dra miaraka amin'ny fanamafisam-peo azo ovaina dia manome safidy tsotra ho an'ny fitsapana ataon'ireo mpampiasa manana filàna samihafa.
Ny Mode an'ny mpampiasa roa dia mamela olona roa hanara-maso, hanara-maso ary hitahiry ny vakiteny amin'ny fitaovana iray ihany. Ny famolavolana bokotra Push iray dia mahatonga ny famakiana marina haingana; Manome salanisa 3 ho azy ny refy ho an'ny fandrefesana mazava kokoa. Ny fizakan-tena eo amin'ny toeran'ny cuff ary ny fisongadinana ny hetsika dia manome sary an-tsary ny fitaovana ho an'ny fandrefesana marina.
Ity fonosana ity dia fonosana iray ihany ao anaty fonosana iray ary miaraka amin'ny zavatra ilainao rehetra mba handraisana mora foana sy haingana ny famakiana ny tosi-dra.
Fampisehoana valiny: tsindry ambony ， tsindry ambany ， pulse.
Fiovan'ny singa: Fiovan'ny tosidra Kpa / mmHg fiovam-po
(herinaratra amin'ny faritra mmHg).
Isan'ny vondrona fitadidiana: vondrona fitadidiana roa, valiny fandrefesana 99 no azo tahirizina ho an'ny vondrona tsirairay.
Clock function: fametrahana taona, volana, daty, ora, minitra
Hamarina amin'ny herinaratra ambany: fahitana ambany herinaratra amin'ny fanjakana miasa, LCD manosika fampisehoana marika ambany hery.
Fitaovana fanaraha-maso YKBPW Wrist Blood Pressure Monitor natao hanampiana ireo marary sy ny fianakaviany hanaraka sy hivaha olana amin'ireo dokoterany, avy amin'ny fampiononana avy ao an-tranony. Ny teknolojia ao amin'ny mpanara-maso ny tosidra, ny mpanara-maso ny hetsika, ny mizana, ny thermometa ary ny fitaovana marani-tsaina dia manampy amin'ny fitadiavana ny fahasalamanao ho mora.
Teo aloha: Pulse Oximeter YK84
Manaraka: Fanamafisana Antibody